Imizekelo yoyilo lomhleli: yintoni kunye neminye imizekelo ebalaseleyo | Abadali be-Intanethi
Imizekelo yoyilo lomhleli
UNerea Morcillo | | Idizayini yeMifanekiso, ngokubanzi
Uyilo lweekhathalogu, okanye wenze iigridi ezilula ezinceda ulawulo olululo olubonakalayo lweetekisi zezinye zezitshixo kuyilo lokuhlela.
Yiyo loo nto umyili olungileyo womhleli kufuneka abe nesiphiwo sokuchwetheza kunye noyilo oluninzi ngokuba zihamba zombini zombini. Kule post siza kungena nzulu kuyilo lokuhlela kunye nendlela oluyichaphazela ngayo imihla yethu okanye umsebenzi wenkampani kunye nokuthengisa.
Ukongeza, ukuba akwanelanga, siya kukubonisa imizekelo kwaye sicebise ngeengcebiso ukuze ube yingcaphephe.
1 Uyilo lomhleli
2 Imizekelo yoyilo lomhleli
2.2 National Geographic
2.3 INew Yorker
3 abaqulunqi bomhleli
3.1 UDavid Carson
3.2 URoger Black
3.3 UMilton Glaser
3.4 UJavier Mariscal
Umthombo: Uyilo lwegraphic kunye nonxibelelwano
Uyilo lomhleli, njengoko igama libonisa, bubuchule obuyinxalenye yosapho olubanzi lobugcisa begraphic kunye noyilo lwegraphic ngokubanzi. Yinxalenye yoyilo enoxanduva ikakhulu lokubeka kunye nokuyila yonke into enento yokwenza necandelo loshicilelo.: iimagazini, iiflaya, iikhathalogu, amakhadi oshishino, iipowusta, njl.
Uyilo lohlelo lubakho ngalo lonke ixesha sivula incwadi ukuze siyifunde okanye ngalo lonke ixesha imagazini ekwithala lethala leencwadi itsala umdla wethu size sigqibe kwelokuba siyifunde. Yiyo loo nto into nganye eyikhava lencwadi. ikwayinxalenye yoyilo lomhleli. Kungoko ubudlelwane phakathi koyilo lwegraphic kunye noyilo lokuhlela. Uyilo oluzama ukusasaza nokufikelela kubaphulaphuli abaninzi.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, uyilo lokuhlela zizinto zonke ezibonwayo esizibona ziqikelelwa kuqweqwe lwemagazini okanye kwikhathalogu, yiyo loo nto uyilo lomhleli lwahlulwe lwaba:
Imigca: Lelinye lawona malungu abalulekileyo kuyilo, Ewe, yeyona iya kuzama ukutsala umdla womfundi kuba iya kuba yenye yezinto zokuqala abazibonayo. Kungenxa yoko le nto i-typography idlala indima ebaluleke kakhulu, kuba kuyimfuneko ukwazi ukuba yeyiphi i-typography eyona ifanelekileyo kumxholo ngamnye. Umzekelo, bekungayi kufaneleka ukubandakanya ifonti ebhalwe ngesandla yokufunda njengoko ingafundeki kakhulu, kodwa kumbhalo oyintloko kuya kuba njalo.
Umfanekiso okanye umzekeliso: Kwi-50% yoyilo kwaye nangona inokubonakala ngathi yinto eqhelekileyo, ngokungathandabuzekiyo yeyona nto iya kubonisa eyona ngqalelo kumfundi. Kubalulekile ukuba umyili azi ukuba luhlobo luni lomfanekiso okanye umzekeliso oza kuwusebenzisa ngamaxesha onke kwaye ngakumbi ukuba inomgangatho kunye neprofayili yombala eyaneleyo kushicilelo lwamva okanye umboniso kwiscreen.
Igridi: Igridi yinto ethi krwaqu kqala iskimu esiphambili kunye nomqolo woyilo, ekubeni iyiyo exhasa zonke iziqalelo ize izibeke ngendlela yokuba zinxibelelene ngokubonakalayo yaye zilungelelane ngokugqibeleleyo. Unokukhetha iinkqubo ezifana ne-InDesign ukwenza ezi ntlobo zezibonelelo.
Ithagethi: Awunakukholelwa apha, kodwa kuyafuneka ukuba wenze uphando ukuze wazi kuqala abaphulaphuli ekujoliswe kubo esiza kujongana nabo. phambi koyilo Kuyimfuneko ukwazi ukuba sithetha nabani ukukwazi ukunxibelelana nomyalezo ngendlela enye okanye enye.
Zininzi iziyilo zokuhlela ezenziwe kwimbali yonke. Kweli candelo sikushiya noluhlu lwezo magazini zithe zangena ezimbalini ngamagama nangoyilo lwamaqweqwe azo. Kubalulekile ukuba ujonge indlela izakhi ezisasazwa ngayo, luhlobo luni lweefonti abazisebenzisayo kunye nendlela abadlala ngayo ngomfanekiso kunye nesicatshulwa.
Umagazini we-Life ungenye yeemagazini ezibalaseleyo zeli xesha, kodwa ngokukodwa le ngqokelela yeeBeatles eyenzelwe ngo-1964. Yintoni ebambe ingqalelo kakhulu kweli phephancwadi kukuba imifanekiso ifotwe nguHenri Cartier ngokwakhe-Bresson.
Ngokuqinisekileyo ngomnye wemizekelo apho umfanekiso uba ngumlinganiswa ophambili kwaye isicatshulwa sidlala indima yesibini kwiphepha elingaphandle. Kungoko ukubaluleka, njengoko kukhankanyiwe ngasentla, kwezinto ezinje ngemifanekiso okanye imizobo.
Ngamafutshane, luyilo olulungileyo oluza kukhuthazwa.
Umthombo: National Geographic
Iimagazini zeNational Geographic ziye zaba ngomnye wemizekelo ebalaseleyo apho umfanekiso unokuba ngumlinganiswa oyintloko wekhava yemagazini. Kule meko, iphephancwadi ngokwayo lahamba ngentsholongwane emva kokubonakala kwentombazana eyaziwayo yase-Afghan uSharbat Gula. Umfanekiso ojike i-180 degrees kwaye ushukumise abantu abalikhulu emhlabeni jikelele.
Yenye yeemagazini eziqulethe eyona mifanekiso ilungileyo eyenziwe zezona foto zibalaseleyo kwihlabathi liphela. Ngokungathandabuzekiyo lolona khetho lubalaseleyo lokuphefumlelwa.
Umthombo: Iiklasi zobuntatheli
I-yorker entsha yenye yeemagazini ezidumileyo eNew York. Akwanelanga nje ukuba igama layo livakaliswe kuzo zonke iindawo zehlabathi, kodwa noyilo lweqweqwe lwalo lwehle embalini. Ngaphandle kokujongana nemiba yezopolitiko kunye neziganeko ezitshintshe imbali yehlabathi, Basebenzisa imizekeliso ebonisa intlekele yeendaba.
Ukusetyenziswa kwezafobe kuyo yonke isigidimi kubalulekile, yaye eli phephancwadi ngumzekelo walo. Ukuba unomdla wokusebenzisa imizobo engaphaya kwemifanekiso, eli phephancwadi lukhetho oluhle lokukukhuthaza.
Umthombo: Unqulo lwehlabathi
Iphephancwadi i-Time lelinye lawona maphephancwadi anempembelelo kakhulu eMelika, kangangokuba bayila iqoqo elikhethekileyo ngaphandle komfanekiso, kwaboniswa kuphela isihloko esikhulu. “Ngaba uthixo ufile?«. Ngaphandle kwamathandabuzo lolunye lwezo yilo apho i-typography iba ngumlinganiswa oyintloko, yiyo loo nto kuyimfuneko ukuba uyilo lwayo lukhaphe umxholo womyalezo.
Imvelaphi emnyama kunye nombala obomvu, yenza isigqubuthelo sidale uxinzelelo oluthile kunye nemfihlakalo kumfundi. Ungumzekelo omhle ukuba ujonge uyilo lokuchwetheza.
UDavid Carson waziwa kwihlabathi liphela ngokudlala kuyilo olukhethekileyo lwemagazini iRayGun. Ungomnye wabayili abagqwesileyo kuba ekwazile ukudibanisa izinto zegraphic ezifana nokuchwetheza kunye nomfanekiso kwaye, emva koko, ukwazi ukunxibelelana nomyalezo ocacileyo. Ngaphandle kwamathandabuzo, ngumzekelo ocacileyo ukuba oko ukukhangelayo luyilo olungabonakaliyo olunobutyebi obubonakalayo obuhle kunye nokuqonda okulungileyo. Ukongeza, inyani enomdla malunga nomsebenzi wakhe njengegcisa kukuba kwakudala ngaphambi kokuba abe ligcisa wayengumlawuli wefilimu, into eyamncedayo ukuba asebenze ngakumbi ngeemvakalelo nangeemvakalelo.
uRoger nguye omnye wootata bomyili bemagazini abaphezulu behlabathi, uluhlu lwayo loyilo lwekhava lubanzi kwaye uqinisekile ukuba uyazi ezinye zazo: iRolling Stone, iNew York Times, iNewsweek, iMcCall's, iReader's Digest, i-Esquire, i-National Enquirer phakathi kwamanye amaqweqwe emagazini. Izinto ezibonakala kakuhle kwimisebenzi yakhe ngokungathandabuzekiyo yindibaniselwano egqibeleleyo kunye nombala kunye nokuchwetheza. ethi itsalele umdla womfundi. Ngumthombo olungileyo wempembelelo kunye nobuchule ukuba ufuna kuphela ukusebenza kunye kuphela kunye nezixhobo ezimbini zegraphic.
Igama lakhe mhlawumbi livakala liqhelekile kuwe, njengoko engomnye wamagcisa kunye nabayili abaye baba yinxalenye yembali ngenxa yoyilo lwakhe. Ngokungathandabuzekiyo ibe luphawu olubalulekileyo lwenkcubeko yobugcisa kwaye ngokuqinisekileyo uya kuyazi ngenxa yemisebenzi yakhe enemibalabala, nokubonakala kwezenzo zakhe. Ngokungathandabuzekiyo ungumzobi ogqwesileyo kwaye uninzi lwemisebenzi yakhe ishicilelwe kwiscreen kwiiteki ezininzi okanye iimpahla, ngakumbi kuyilo oludumileyo lwe. Ndiyayithanda iNew York, uyilo olugqwesileyo ukuba ungumkhenkethi.
Igcisa lonyaka kwiMidlalo yeOlimpiki ye-Barcelona ka-92 wayengenakuphoswa.Udume ngokuyila imaskoti yeMidlalo yeOlimpiki, iCobi. Ngexesha leprojekthi yakhe eSpain, wenze iipowusta, imifanekiso eqingqiweyo, uphawu, iipowusta, iinoveli zegraphic, oopopayi, icinema, ifenitshala, uyilo, ukupakishwa, uyilo lokuhlela kunye nokuhombisa. Yenye yeembekiselo zaseSpain ekufuneka uzilandele ukuba uyalithanda ilizwe lemizekeliso, ungajonga kwakhona kwimisebenzi yabo, njengoko beyiyile kwaye babonelele ngobuntu obuyimfuneko ukuze iiprojekthi zakho zibonwe luluntu.
Ngamafutshane, uyilo lokuhlela lwehlile kwimbali yoyilo lwemisebenzi yayo emininzi, kangangokuba bekuya kuba luluhlu olungenasiphelo ukubonisa umsebenzi ngamnye oyilwe ngalo lonke eli xesha. Kwakhona kubalulekile ukuba ucace malunga nezinto eziphambili kunye nesibini xa uyila ikhava okanye ngokubanzi iprojekthi yoyilo lokuhlela.
Unokuzibhala ngokwakho malunga noSawule Bass, uNeville Brody, uStefan Sagmeister, uYuko Nakamura, uJessica Walsh phakathi kwabanye abaninzi.
Siyathemba ukuba ufunde okuninzi malunga noyilo lomhleli, kwaye siyakumema ukuba uqhubeke nokuphanda ngakumbi malunga nabanye abayili ebesikhe sathetha ngabo ngaphambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Imizekelo yoyilo lomhleli
Imvelaphi entle yePowerPoint